La Liga | Mustaqbal Radio
kooxda Kubadda Cagta ee Barcelona ayaa hanatay Koobka Boqorka Dalka Spain markii afaraad oo xiriir ah kaddib markii ay xalay 5-0 ku qabatay Kooxda Sevilla oo finalka koobkan u soo baxday. Xiddiggaha Suarez,Messi, Iniesta iyop Coutinho ayaa dhamaantood gaaray shabaqa,waxaana labo gool kulanka ka dhaliyay Suraez. Barcelona ayaa sidaas ugu dabaal degtay Koobka Boqorka iyada oo todobaadkanna isu diyaarineysa dabaaldegga ...
Real Madrid oo dooneysa inay qandaraaska u kordhiso Ronaldo ka hor Koobka Adduunka.
Kooxda ka dhisan caasimada dalka Spain ayaa ku rajo weyn iney qandaraaska u kordhiyaan xidigooda heerka caalami ee Ronaldo. Jose Angel Sanchez, oo ah agaasimaha guud ee kooxda, ayaa lagu soo waramayaa inuu kala hadalay weeraryahanka si uu u ogaado in Madrid ay aad ugu faraxsan tahay qaab ciyaareedkiisa islamarkaana qorsheyneyso qandaraas cusub, iyadoo mushaar kordhin lagu daray heshiiska. Sida ...
HORDHAC: Barcelona Vs Sevilla + Safafka Macquulka ah.
Waxaa caawa lasoo gaba gabeeyn doonaa koobka xiisaha badan ee Copa Del Rey oo ka mid ah Tartamada laga ciyaaro Dalka Spain, waxaana kama dambeysta wada Balansan kooxaha Barcelona iyo Fc Sevilla. Kooxda Barcelona ayaa kulanka u soo galaysa in ay ku guulaysato koobka markii 4-aad oo xiriir ah iyo markii 30-aad ee taariikhdeeda. Dhanka kale Kooxda Sevilla ayaa isha ...
Ronaldo oo bar-bareyay rikoor uu dhigay Cristiano.
Weeraryahanka Kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa xalay rikoor kale sameeyay kaddib markii uu dhaliyay goolkiisii 12aad oo xiriir ah. Xiddiggan ayaa rikoorkan oo kale horay u dhigay waxaana ka hor kulankii xalay isha lagu wada hayay in uu dhalin karo goolkiiisa 12aad oo xiriir ah xilli ciyaareedkan. Kulan kasta oo uu ku soo billowday waxaa uu dhalinayay gool,waxaana uu ...
Valencia oo u gacan haatineysa xidig united-ka u ciyaara.
Paris Saint-Germain oo lacago waali ah ku dooneysa xidig Real u ciyaara.
Naadiga Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay udhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Casemiro xagaagaan. Kooxda heysata horyaalka Faransiiska ayaa u aragtay ciyaaryahanka reer Brazil inuu yahay bedelka xiddiga 34 jirka ah Thiago Motta, sida laga soo xigtay AS. Heshiiska Casemiro ayaa la sheegay in lagu burburin karo aduun dhan € 200m (£ 173m). Warar soo ...
Barcelona oo xoojisay xiisaha ay u qabto xidig Tottenham lafdhabar u ah.
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Hotspur Christian Eriksen, iyadoo ugu sareysa liiska ciyaartoydooda suuqa kala iibsiga si ay u bedelaan Andres Iniesta. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa lagu soo waramayaa inuu ka tagayo Camp Nou dhamaadka xilli ciyaareedkan ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxda reer ...
Real Madrid oo hishiis shaqsi ah la gaartay goolhaye ay mudo ku raad joogtay.
Goolhayaha Manchester United David De Gea ayaa heshiis la gaaray inuu ku biiro Real Madrid xagaagaan, sida laga soo xigtay Mail. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu ku laabanayo dalkiisa hooyo ka dib markii uu isku dayay inuu u saxiixo Los Blancos sannadkii 2015. Inkastoo De Gea uu carabka ku adkeeyay ...
Manchester City oo ku raad joogta da,yar kaso baxay akademiyada Barcelona.
Laacibka da,da yare ee kaso baxay xerada tababarka kooxda Barcelona ee Adrian Bernabe ayaa lagu soo waramayaa inuu ka tagayo kooxda Barcelona kuna wajahanyahay City xagaagan. Sida laga soo xigtay Sport, 16 jirkaan ayaan cusbooneysiin doonin qandaraaskiisa kooxda La Liga dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana uu ku sii jeedaa Manchester si xor ah. Barca ayaa la sheegayaa inay dooneyso ...
Da,yar akademiyada Barcelona kaso baxay oo lagu wado inuu noqdo badalka Iniesta.
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhawaaqday inay ka fikireyso soo qaadashada ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lazio Luis Alberto. Xili Andres Iniesta uu rajeynayo inuu ka tago Camp Nou xili ciyaaredka danbe , tababare Ernesto Valverde ayaa doonaya inuu helo badalka andares waxaana uu u muuqdaa in kooxda reer Catalan inay isku dayi doonto inay la soo ...
HORDHAC: Celta Vigo vs Barcelona, +Safafka Macquulka ah.
Barcelona ayaa caawa marti u noqon doonta kooxda Celta Vigo kulan ku tirsan Horyalka Spain waana Todobaadkiisa 33aad. Barca ayaa dooneysa in ay sii wado Rikoor kooda cajiibka ah ee LaLiga, iyagoo Talaabo kale usii qaadaya ku guuleysiga LaLiga ee Sanadkan. XOGTA KULANKA: Kulanka: Celta Vigo Vs Barcelona Tartanka: La Liga Wakhtiga: 10:00 Habeenimo Garoonka: Estadio de ...
Salah oo diyaar u ah inuu u dhaqaaqo Real Madrid sabab?
Xiddiga Liverpool Mohamed Salah ayaa diyaar u ah inuu u dhaqaaqo kooxda ka dhisan Spain ee Real Madrid, sida laga soo xigtay wargeyska Marca. Salah oo 25 jir ah ayaa xilli ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya Liverpool, isagoo dhaliyay 40 gool tartamada oo dhan. Ciyaartoydaasi waxay arkeen xiddiga reer Masar oo lala xiriirinayo kooxo waa weyn oo Yurub ah, oo ...